Ejipta · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Jona, 2018
Fivavahana 26 Jona 2018
Fahalalahàna miteny 24 Jona 2018
Amboaran'ny Konfederasiona: Noresen'i Ejipta i Italia, tompondaka manerantanin'ny football
Italia 23 Jona 2018
Mbola niroso dingana mankany amin'ny manasa-dalan'ny Amboaran'ny Konfederasiona ihany i Ejipta taorian'ny fandresena Ejiptiana 1-0 manoloana an'i Italia, tompondaka manerantany. Taorian'ny lalao, maro ireo Ejiptiana nidina an-dalambe mampaneno ny anjomaran'ny fiara amin'ny sasakalina. Lasa feno fiara ny arabe izay nalalaka nandritra ny lalao.
Libia 22 Jona 2018
Tahotra sy fisavorovoroana no namely ny Ejipsiana maro taorian'ny tranga H1N1 voaloahany, na gripan-kisoa hita tao amin'ny firenena. Efa nanomboka tokoa ny tahotra talohan'ny nifindran'ny viriosy, izay nanosika ny governemanta Ejiptiana hanavao ny kisoa.
Ejypta: Mampiasa media sosialy ny tanora mba hanotorana ny elanelana
Fahalalahàna miteny 20 Jona 2018
Ejipsiana miisa 30, 18 ka hatramin'ny 28 taona, no niara-nientana mba hamokatra dokambarotra ara-tsosialy 10, mikendry ny fanavaozana ara-tsosialy.
Hafanam-po 14 Jona 2018